> Resource > Video > Sida loo tir-Waji baxay Video
Maxaad samayn qof warwareegaa marka video galay, oo aanad haysan ogolaansho in ay iyaga ka mid ah? Si loo ilaaliyo arimaha gaarka ah, waa in aad xannibi wejiga ka soo baxay in videos. Laakiin inta badan barnaamijyo tafatirka video laga helo suuqa maanta ma ogolaado in aad qasayo oo keliya qayb yar oo ka mid ah shaashadda. Waxaad qasayo video oo dhan ama wax aad qasayo.
Haddii aad rabto in aad xannibi wejiga ka soo baxay in video, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho video tafatirka qalab kala duwan. Qalab ugu fudud ee aan ogaaday u xanibeen wejiga ka soo baxay in video waa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Waxaa si toos ah raad ugu booska iyo warejin wajiga aad video, taas oo kuu oggolaanaysa in aad loo joojiyo wajiga aan ka kaaftoomi kasta. Hadda hubi tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida ay u xiri wejiga ka soo baxay in video isticmaalaya tallaabooyinka hoose.
1 dejinta video bartilmaameedka
Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor). Riix ah "Import" button, ka dibna uu dedeg iyo double-riix file video ah. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi video ah barnaamijka. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) wuxuu taageeraa qaabab video kala duwan sida FLV, MKV, MP4, MOV, Mpg, MPEG, VOB oo toos ah ku shuban doonaa video ah si aad u saxaa.
2 Bilow xanibeen wejiga ka soo baxay in video
Ka dib markii in, muujiyo video iyo jiididda iyo hoos si ay ula socdaan video of jab waqtiga ay. Midig u guji iyo dooran "Power Tool". Markaas daaqad arbushin doonaa. In daaqadan, bedesho submenu ah "waji Off" oo xulo "Ka codso Face Off in clip ah". Sida aad arki karto, waxaa jira dhibaatooyin soo fool off kala duwan si aad u doorato. Waxaad ka qaadan kartaa saamayn mosaic fudud ama calaamado kale oo lagu qoslo sida aad jeceshahay. Marka aad doorato, barnaamijka isla markiiba gelin doonaa saamaynta ay wajiga u ogaado.
Ogsoonow in la ogaado wajiga Ma laga yaabaa in 100 boqolkiiba sax ah. Mararka qaarkood Wajigooda Maayo hor istaagay ka baxay. Si aad u samaysan, u tag ah "Muuse" submenu iyo sax "Codso Muuse in clip ah" oo guji "Add". Isku Aadka sanduuq ka badan wejigooda oo u baahan in la xakameeyo baxsan oo dhan waxaa lagu sameeyaa.
Ka dib markii in, riix "Play" badhanka si ay u arkaan natiijada. Haddii lagu qanco, dhufatey "Abuur" button iyo doorato mid ka mid ah hababka soo saarka ee suuqa kala pop up ka ah. Halkan waxa aad dooran kartaa in aad badbaadin qaab gaar ah, gubi in DVD ama si toos ah u wadaagaan video cusub on YouTube ama Facebook.